Magaalada Baydhabo mar kale waxaa gaaray manta dadkii Soomaliland kasoo musafurisay magaalada laas-caanood | Dayniile.com
Home Warkii Magaalada Baydhabo mar kale waxaa gaaray manta dadkii Soomaliland kasoo musafurisay magaalada...
Magaalada Baydhabo mar kale waxaa gaaray manta dadkii Soomaliland kasoo musafurisay magaalada laas-caanood
Maanta ayaa waxaa magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay waxaa gaaray qaar kamid ah dadkii Soomaliland kasoo musafurisay magaalada laas-caanood ee Xarunta Gobolka Sool, kuwaas oo malmihii la soo dhaafay wadada kusoo jiray.
Dadkan oo saarnaa Gawaarida waaweyn ayaa waxaa ay safar dhinaca dhulka ah kusoo mareen degaano ka tirsan Maamulada Puntland, Galmudug & hir-Shabeelle, iyaga oo ugu dambeyn gaaray magaalada Baydhabo.
Qaar kamid ah mas’uuliyiinta Maamulka Koonfur Galbeed & qeybaha kala duwan ee Bulshada Magaalada ayaa dadkaasi soo dhaweeyay, iyada oo dib u dejin loogu sameeyay meelo kamid ah Magaalada baydhabo.
Xubnaha Guddiga Wasiirada ah ee Madaxweynaha Koonfur Galbeed uu u xilsaaray la socoshada xaalada dadka Somaliland soo musaafurisay ayaa ku sugan magaalada Gaalkacyo, waxaana la filayaa in Maanta markale ay diyaarad kusoo qaadaan qaar kamid ah dadkaas.
Somaliland ayaa aad loogu dhaleeceeyay tallaabada ay kusoo musaafurisay dadka shacabka ah ee kasoo jeeda degaannada Koonfur Galbeed ee ku sugnaa Magalada laas-Caanood, kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay qeyb ka ahaayeen amni darrada kajirta Magaalada.
Previous articleDadka Ciraaqiyiinta oo u dareeraya goobaha codbixinta doorashada baarlamaanka oo la qabanayo xilli hore
Next articleXeebta Magaalada Mombasa oo meydad Soomali ah laga helay
Jordan Peterson, a questionable scholastic that has actually been implicated of Islamophobia, has actually said he will certainly attend a collection of workshops at...